प्रियंकासँग नचलेका आयुष्मान शिल्पासँग चल्लान् त ? « Mazzako Online
प्रियंकासँग नचलेका आयुष्मान शिल्पासँग चल्लान् त ?
नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले पहिलो पटक सँगै काम गरेको चलचित्र प्रेमदिवस अहिले हलमा लागिरहेको छ तर दर्शकको साथ भने उल्लेखनीय छैन । डाइरेक्ट भन्न पर्दा फिल्म फ्लप नै भयो । अब फेरि आयुष्मानको अर्को चलचित्र सानो मन रिलिजको तयारीमा छ जसमा उनले नायिका सिल्पा मास्केसँग जोडी बाधेका छन् ।
प्रियंकासँग नचलेका उनि अब के सिल्पासँग चल्लान त ? नायक आयुष्मानले चलचित्र चपली हाइट २ बाट डेब्यु गरेका हुन् । फिल्मले केहि चर्चा पाएका उनले परामिता आर एल राणासँगको ब्रेकअप र चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीसँगको प्रेमले धेरै नै चर्चित बनायो । फिल्म सँगै म्युजिक भिडियोमा पनि काम गर्न थाले आयुष्मान र प्रियंकाले । आयंका नाम पाएका यी दुईले एक अर्काको अपोजिटमा काम गरेको पहिलो चलचित्र भने प्रेमदिवस हो जुन अहिले हलमा चलिरहेको छ तर थोरै दर्शकका साथ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चा हुदै आएकी आफ्नी प्रेमिकासँग काम गरेको चलचित्र नचलेपनि उनलाई खासै फरक पनि परेको छैन । उनी प्रियंकासँग खुबै रमाईरहेका छन्, प्राइभेट फङ्कसनहरूमा । चलचित्रको कुरा गर्दा आयुष्मानको अब रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र हो सानो मन । यसमा उनी नायिका सिल्पे मास्केसँग देखिदै छन् । कमै नेपाली फिल्म चलिरहेको समयमा सानो मनले दर्कसकको कस्तो साथ पाउला त्यो त अहिल्यै भन्न सकिन्न ।
आयुष्मानले चलचित्रबाट सफलताको स्वाद पाउन सकेका छैनन् । अब सानो मनबाट उनी चलचित्र अभिनयमा अब्बल र सफल देखिनु जरूरी छ । आफ्नै प्रेमीका सगँ नचलेका आयुष्मान सिल्पासँग चल्लान् त रु फिल्म रिलिज पछि नै थाहा होला ।